Fanatanjahantena · Avrily, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Fanatanjahantena · Avrily, 2008
Tantara mikasika ny Fanatanjahantena tamin'ny Avrily, 2008
Hong Kong (Shina)30 Avrily 2008
Tselatra · Japana27 Avrily 2008
Shina26 Avrily 2008
Fitantanam-pitondrana17 Avrily 2008
Iran: tsy handalo any Iran ny afo olaimpika
Tselatra · Iràna13 Avrily 2008
Nanoratra Razeno [Fa] fa raha hitety firenena maro ny afo olaimpika dia anaty lisitra kosa ny handalovany any Iran. Nampian'ny mpamaham-bolongana moa fa mandalo ao Pakistan izay itrangana herisetra maro ny afo olaimpika. Malahelo tokoa Razeno amin'ny fanaovan'izao tontolo izao ankivy an'i Iran.
Tselatra · Karaiba11 Avrily 2008
Shina: fiarovana ny voninahi-pirenena
Tselatra · Shina11 Avrily 2008
Itrikitrihin'i ESWN fa loza mitatao eo amin'ny fifandraisan'ny vahoaka anararaotan'ny hevitra ifampizaran'ny maro an'isa any Shina hiarovana ny voninahim-pirenena ny fihetsiketseham-panoherana mihatra amin'ny afo olaimpika. Nandika tati-baovao roa amin'ny teny shinoa roa miresaka ny fihetsiketseham-panoherana ny fandalovan'ny afo olaimpika ny lehilahy.
Tselatra · Amerika Latina09 Avrily 2008